Looks Nepal याे राजनिति गर्ने समय हैन । जनताकाे सुरक्षामा जुट्नुस : महेश खेरल नगर प्रमुख पाँचखाल नगरपालिका – Looks Nepal
Apr, 9, 2020	looksnepal
काभ्रेपलान्चोक / पाचंखाल नगरपालिका का नगर प्रमुख महेस खरेल काेराेना भाईरसकाे महामारिकाेे याे समयमा नियमित रुपमा नगरभित्र स्वास्थकर्मि लिएर टाेल टाेल अनुगमनमा निस्किरहेकाे अवस्थामा नगरभित्र प्रतिपक्षकाे दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडा अध्यक्षहरुकाे असन्तुष्टि सहितकाे अपिल सार्वजनिक भएपछि उहाँहरुकाे अपिललाई सम्मानका साथ जवाफ पठाएका छन् ।
केहि समय अघि ३ नं प्रदेश सरकारलेे आफ्नाे प्रदेश भरिबाट उत्कृष्ट नगर प्रमुख र नगरपालिका काे अवार्ड प्रदान गरेकाेे उनै नगर प्रमुख खरेलकाे जवाफ जस्ताकाे तस्तै :-
विश्वमा महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) संक्रमणबाट पुरै विश्व आक्रान्त छ । विश्व सँगै नेपालमा पनि सजगता कायम गर्दै नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन(बन्दाबन्दी) घोषाणा गरेको छ । कोरोनाको त्रास हाम्रो नगरपालिकामा पनि परेको छ । नेपालमा त्रास बढेसँगै पाँचखाल नगरपालिकाले विभिन्न सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।
अनेकोटमा कोरोना भाईरसबारे सचेतना गराउदै नगर प्रमुख खरेल
सबैभन्दा पहिला कोरोनाबारे जानकारी दिँदै नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरणको कार्यक्रम आयोजना भयो । त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालयका स्वास्थ्य शिक्षकहरुलाई सचेतना गरायौं । एम्बुलेन्सहरुलाई तयारी अबस्थामा राख्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई क्रिया र प्रसुति बाहेकका विदा नदिने, आवश्यक औषधि तयारी अवस्थामा राख्ने, तथा पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा समाजकल्याण प्राविमा क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने काम गर्यौ । अहिले नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई) पुर्याईसकिएको छ । विभिन्न सहयोगी संस्था तथा नगरले संकलन गरेका राहत सामाग्री पहिलो चरणमा विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई ५ किलो चामल, दाल लगायतका सामाग्री वडा मार्फत वितरण गरिरहेका छौं । केहि वडामा वितरण भै सकेका छन भने केहि वडामा वितरणको क्रममा छौं ।
अहिले सम्म नगरको वडा नं ३, ४, ६, ७, ९, १० र १२ नं वडामा पहिलो चरणको राहत सामाग्री पुगिसेको छ भने अन्य बाँकी वडाहरुलाई पनि राहत सामाग्री लैजान अनुरोध गर्दछु । चैत्र ९ गते विपद् व्यवस्थापनको बैठक राखेर यो महामारीबाट कसरी नगरले सामाना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौ । तत्कालको लागि वडागत हिसावमा ५० हजारको दरले विपद् व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध गराउने तथा नगरमा १० लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्यौ । पहिलो ५० हजारको विल भर्पाई बुझाएर अर्को ५० हजार वडाले खर्च गर्न सक्ने भन्यौ । त्यस पछिको समयमा मेरो आमाको पाठेघरको अप्रेसनको कारण केहि दिन नगरमा उपस्थित हुन सकिन ।
साेहि कारणले नगरका कामहरु नरोकियोस र अप्ठेरो नपरोस भनेर नगरलाई आईटी फ्रेण्ड्ली बनाउन तथा नगरमा नौलो प्रयास गर्दै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसियो । नगरमा उपप्रमुखले संयोजन गर्नुभयो । यो बाट के पुष्टि भयो भने यो नौलो प्रयासले अप्ठेरो परेको बेलामा नगरका काम कार्वाहिमा सहज हुने रहेछ । त्यसपछिको गतिविधिहरुमा आमा सँगै नर्भिक अस्पतालमा बस्नुपरेपनि फोन मार्फत कार्यालय तथा वडाअध्यक्षहरुसँग समन्वयमा रहेँ । एकातिर नगरको बारेमा चिन्ता थियो भने एकातिर आमा अस्पतालमा हुनुुहन्थ्यो । मेरो लागि दुवै महत्वपूर्ण थियो । आमाको डिस्चार्ज भयो । अस्पताल बस्दा नगरको विषयमा पेट पोल्थ्यो । अरु वेलामा भए त केहि थिएन तर यो माहामारी अनि सरकारको लकडाउनमा नगरवासीहरु के गर्दै छन् भन्ने चिन्ताले मन पोलिरहन्थ्यो । कत्तिखेर पाँचखाल आउँ भएको थियो यसै क्रममा चैत्र १८ गते आमाको डिस्चार्ज भयो । आमाको डिस्चार्ज हुने वित्तिकै आमालाई घरको आँगनमै छाडेर पाँचखाल आए । त्यस दिन देखि नगरमानै छु । एक दिन नगरवासी राजेश न्यौपानेले आफ्नो आमाको लागि औषधि नपाएको गुनासो गर्नुभयो । गुनासो आएपछि त्यो औषधि लिन एक रात काठमाण्डौ गएर फर्केेदेखि म नगरमानै छु । त्यसपछि राजेशजी जस्तै समस्यामा पर्नुभएको व्यक्तिहरुको सहयोगमा नगरमै मेडिकल हेल्थ डेस्क स्थापना भएको छ ।
म आग्रह गर्न चाहान्छु कुनै पनि नगरबासीलाई पाँचखालमा औषधि पाउनुभएको छैन भने नगरपालिकामा संगिता दनुवारलाई फोकल पर्शन तोकेर हेल्पडेस्क स्थापना भएको छ । तपाईहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा उहाँलाइ ९८४३१६८५९८ नम्बरमा फोन गरेर समस्या टिपाउन सक्नुहुन्छ । हामी नगरसम्म औषधि ल्याइदिनेछौं । मेरो बुबाआमा पनि दैनिक औषधि खाने हुनुहुन्छ । दैनिक रुपमा बुबाआमा सँग फोन सम्पर्कमा छु । बुवाआमालाई आवश्यक पर्ने औषधि छिमेकिलाई गुहारेर ल्याउन लगाएको छु । यस्तो अवस्थामा रहेर नगरमा बसेको छु तर विगत ३ बर्ष सम्म सहयात्रा गरेका साथीहरुले मेरा तथा नगरको विषयमा एक्कासी विज्ञप्ती निकाल्नु भएकोमा आश्चर्यमा छु । कुनैपनि समस्या तथा कमी कमजोरीको समाधान निकाल्ने थलो कार्यपालिका भएपनि साथीहरुले राजनैतिक पहिचान खुल्ने गरी भिन्दै बैठक गरी विज्ञप्ती निकाल्दा म अत्यन्तै दुःखी भएको छु । मलाई लाग्छ यो हुनु मेरो नै कमजोरी भएर होला । हामी अहिले सम्म साथीभाईको मन जित्न सकेको रहेनछु । म सफल हुँदा सिङ्गो नगरका जनप्रतिनिधि र जनता सफल हुनु हो । म असफल हुँदा सबै असफल हुनु हो ।
म आग्रह गर्छु हामी सबै एक जुट भएर हिड्दा मात्र नगरमा विकास निर्माणले गति लिन्छ । नागरिक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ठ सेवा दिए वापत बाग्मती प्रदेश सरकारले पाँचखाल नगरलाई उत्कृष्ठ नगर घोषणा गर्दा सबै नगरवासीको शिर उच्च भएको छ । यो सबै जनप्रतिनिधि र जनताको उपलब्धी हो । २०४६ साल पछि राजनैतिक विसंगतीले सबै राजनैतिक पाटी घेरिएका छन् । आफ्नै पार्टी तथा विपक्षिले पनि राम्रो काम गरेपनि सिध्याउने परिपाटी बसेको छ । राजनैतिक सिद्धान्तमा रहेका महान नेताहरुको मार्गदर्शन गर्नु आवश्यक छ । विपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, मदन भण्डारीले पार्टी बिशेष भन्दा पनि मुलुकको हितको लागि काम गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५६ सालमा राजीनामा दिदै भन्नुभएको कुरा अहिलेपनि मासपटलमा हटेको छैन् । ‘यो सतिले सरापेको देश हो । भिमसेन थापा जस्ता मान्छे सेरिएर मर्नुपरेको थियो ।’ हामी एक अर्काको आङको जुम्रा केलाउँदै हिड्ने भन्दा पनि यत्रो संसारले जित्न नसकेको कोरोना विरुद्ध एक भएर लड्नु आवश्यक छ । एक जुट हुन सकेनौ भने कुन नैतिक बल र उर्जा लिएर लड्ने हो ? एक अर्कामा लडेर यो सम्भावना छैन् । हामी एक अर्का विरुद्ध लड्ने हस्तिनापुरको राजपरिवार (पाण्डव र कौरब) विभाजित भएर लड्ने हो भने पाँचखाल नगरपालिकाले विकासको फड्को कहिले मार्ने । के मैले प्रतिष्पर्धी सहभागि दल सँग प्रतिष्पर्ध सम्बन्धित र समन्वयमा केहि कमजोरी गरेको छु र ? स्व. रुद्र ब. बानियाँको निधन पश्चात आफ्नो कार्यकक्षमा फोटो ल्याएर राख्नु र शालिक बनाउनु के मेरो भुल हो ? गएको नगर सभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रचण्डलाई निम्तो दिएर ल्याउन खोज्नु मेरो भुल थियो ? यसमा मैले गरेको प्रत्येक क्रियाकलाप र सहकार्यमा पाँचखालको विकास लुकेको कुरा सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई अवगत गराउन चाहान्छु ।
मैले प्रत्येक वडामा गएर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपलब्ध हुनुभएका वडाअध्यक्ष, उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग अहिलेको स्थितिको बारेमा परामर्श गर्नु र विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरु जम्मा भएर बसेको गुनासो आएपछि अनुगमनमा जानु मेरो अपराध हो ? अनेकोटको घुमाउने, खावा र ठाटीमा सयौं व्यक्तिहरु चिया, भट्टी पसलमा बस्ने, बजार घुमघाम गरिरहेको पाउँदा उहाँहरुसँग नगरको हितको लागि संक्रमण नसरोस भनेर सचेतना दिनु मेरो अपराध हो ? त्यस बखत मैले बोलेका कुराहरु सामाजिक संजालमा सुरक्षित छन् । मैले कुनैपनि दल, विशेषगरी मैले निर्वाचन लडेको दलको विषयमा कुरा गर्ने, भोट माग्ने अथवा पार्टीगत कुरा गरेको भए म जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर मैले यस नगरको सबै नगरबासीको अभिभावकको नाताले आफ्ना नगरवासीहरुलाई सुक्षित राख्नको लागि भिडभाड नगर्नुस, घरमा सुरक्षित बस्नुस, जुवा तास नखेल्नुस, जाँड रक्सि नखानुस, भन्नु के अपराध हो ? यदि यो अपराध हो भने मलाई कार्वाहि गरियोस । अझ जेलमानै हालियोस । जनता र नगरवासीको लागि जस्तोसुकै कष्ट र जेल जिवन विताउन तथा जस्तो कार्वाहि भए पनि म भोग्न तयार छु । फेरी पनि भन्छु अझ पनि भन्छु घरबाट ननिस्कनुस, चिया पसलमा ननिस्कनुस, बुबा आमा परिवारको ख्याल गर्नुस । यो समयमा कसैले जित्न सक्ने समय हैन । कोरोना सँग हाम्रो भन्दा धेरै राम्रो श्रोत साधन भएका तथा धेरै राम्रो उपचार गर्ने सामाग्री भएका देशलाई त हम्मे हम्मे परेको छ । हाम्रो जस्तो सिमित श्रोत साधन भएको देशमा पशुपतिनाथ र बुद्ध सँग भरोसा गर्ने बाहेक देशमा साच्चिकै संक्रमण फैलिएमा गर्न सक्ने उपाय केहि छैन् ।
त्यसैले सम्पूर्ण प्यारा जनप्रतिनिधि दाजुभाईहरुलाई एकजुट भएर हिड्न अनुरोध गर्दछु । कुनै कमी कमजोरी भएमा नगरभित्रै कार्यपालिकामा छलफल गरेर समस्याको समाधान गरौं । हामी सबै मानिस हौं । काम गर्दै जाँदा केहि कमजोरी हुन सक्छन् । भएका कमीकमजोरीलाई आपसी सरसल्लाह र सद्भावद्धारा समाधान गर्न सकिन्छ । अहिलेको समय भनेको पार्टीगत भन्दा पनि एक तह माथी उठेर नगरवासीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत दिऔं । उहाँहरुको सेवा गरौं । अहिले हामी विर्सौं । यो बेलामा कुन राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्छौ भनेर । राजनिति गर्ने समय आउँछ । त्यतिखेर राजनिति गरौंला । हामीले नगरका जनताको सेवक बनेर काम गरौं ताकी शासक बनेर हैन । नगरले राहत वितरण गर्दा एकद्धार प्रणाली अपनाएको छ । राहत संकलन नगर मार्फत गरिदिनुहुन अनुरोध पनि गर्दछु । नगरमार्फत संकलन गरेका राहत वडा मार्फत वितरण भएरहेका छन् । कुनै पनि वडामा वडा अध्यक्षहरुको सिफारिस तथा सहमति विना राहत वितरण हुँदैन । यसको निरिक्षण तथा अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, संचारकर्मी तथा मानवअधिकार आयोगलाई अपिल पनि गर्दछु ।
अन्तमा, यो समयमा आफ्नो घर परिवार छाडेर सेवामा समर्पित रहनुहुने कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनको उच्च प्रशंसा गर्न चाहान्छु । विशेष गरि स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रहरीमा खटिनुभएका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको मनोवल उच्च बनाउन नगरवासीहरुमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु । म पुनः सम्पूर्ण पाँचखाल नगरबासी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको पालना गर्दै लकडाउनमा सहयोग गरौं । घर भित्र बसौं, आफू पनि सुरक्षित हौं । अरुलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिउँ । आफु पनि बाँचौ अरुलाई पनि बचाऔं । जय पांचखाल !! जय नेपाल !!!
नगर प्रमुख खरेलले आफ्ना सबै गतिबिधिहरु सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक गर्दैै आईरहेकाछन् ।
एसइईको प्रश्नपत्रबारे प्रदेश २ मा लफडा, फेरि आयो भोली हुने विषयको प्रश्नपत्र सामाजिक संजालमा